Izinzuzo ezingaba khona ze-Worn Wera Camera for Enforced Law Izixazululo ze-OMG
Izinzuzo ezingaba khona zeKhamera yeWall Worn for Enforcing
Ukufakazwa kobufakazi njengezithombe ezibukhoma kusize kakhulu ekushintsheni ukuthi amacala obugebengu aphathwa futhi aphathwa kanjani. Uhlelo lwezobulungiswa bobugebengu manje lubonakala lunobufakazi obuningi bokukhipha isahlulelo nalo, ikhamera egqoke isidumbu manje isifana nalelihlo elengeziwe eliqopha umcimbi wokubuka kamuva. Ikhamera egqoke umzimba iye yaphenduka into entsha yobuchwepheshe obusha obekusiza amaphoyisa ngokuxazulula amacala. Ngemuva kwezinyanga ezithile zokusebenzisa, abezomthetho bakwazile ukugebenga amanye amacala odlame lwasekhaya. Kuhlala kuyinkinga ukuthola abafakazeli ngamacala athinta udlame lwasekhaya, abantu bahlala befuna ukubalekela ukufakazela omakhelwane babo ngalokho abakubonile. Kepha ngekhamera egqoke umzimba, yonke into iyaqoshwa futhi ngaleyo ndlela la mavidiyo asetshenziswa futhi ukukhombisa ukuthi kukhona okungalungile okwenziwe.
Ukushayiswa kwevidiyo okuvela kumakhamera omzimba nakho kusetshenziselwa ukusiza ekushushisweni kwabashayeli abaphuzile, uma umuntu owephule umthetho ebanjwa futhi agcinwe esitokisini kuze kube ukuphuma kwesiphuzo kuyaphela. I-video ikhonjiswa kubo ukufakazela kubo ukuthi abakwenzile akulungile. Le vidiyo ingakhonjiswa nakwabanye izakhamizi ukusiza ukuyithola ngokushesha. Lawa makhamera agqokwa ngomzimba asetshenziswa futhi ukwenza umdwebo wokumiswa kwezimoto zabashayeli abanelayisensi emisiwe noma ephelelwe yisikhathi. Amavidiyo avela kule khamera egqokwa ngumzimba nawo angasetshenziswa ekuhlonzeni ubugebengu endaweni yesehlakalo.
Ikhamera egqoke umzimba
Ezinye izici ezinkulu zamakhamera agqokwa ngumzimba mancane, ahamba kalula. Amadivaysi ikakhulukazi agqokwa yizikhulu zomthetho ukuqopha ukusebenzisana kwazo emphakathini, la makhamera agqokwa ngomzimba angakwazi ukukhipha ukuqoshwa kwevidiyo nomsindo. Abanye bakhiqiza ukuqoshwa kokulalelwayo bodwa kodwa lokho kuyaphela kancane kancane. Lawa mavidiyo agcinwa kwisitoreji sendawo noma angalayishwa online ngeplatifomu ethile esekwe kwi-inthanethi kwenye indawo yokubekisa. Bahluke kakhulu kwikhamera ye-dashboard njengoba leyo ihleliwe futhi ingarekhodi yonke indawo yesikhulu. Ikhamera egqokwa ngumzimba iyahlukahluka ngesici esifana:
Ukuqoshwa kwangaphambi komcimbi
Lokhu okulandelayo kungukuthuthuka okubonwe ngokusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba ezinhlakeni zomthetho:
Ama-ejensi wokuqinisa umthetho asebenzisa imali eningi ukuthola le divayisi yokuqopha imvamisa phakathi kwe- $ 700 ne- $ 900 lilinye. Ngokuqoshwa kwendlela abameli bezomthetho abaxhumana ngayo nezakhamizi, le nhlangano iyakwazi ukukhombisa umphakathi ukuthi isebenza obala ekusebenzeni kwayo. Kubaluleke kakhulu futhi nangokuphenya amacala phakathi kwesakhamuzi nesikhulu, lokhu kuhlale kwenza kube lula ukufakazela ukungabi msulwa noma necala lesikhulu esinjalo. Ukuba namarekhodi wevidiyo kusiza ngempela abameli bezomthetho ukuthi baqoqe ubufakazi futhi kuxoxisana nofakazi. Ukuba nefilimu yobufakazi obuthile kuvame ukwedlula okwanele ukuvula icala esikhundleni sakho. Izinhlobo zamakhamera agqokwa ngomzimba angaxhunyaniswa nezibuko, imakrofoni yomsakazo noma ngisho nokunamathiselwa engubeni yasesikhulu. Ngokuphenya konke okudingeka bakwenze ukuhambisa nje leyo khamera ukuze kuzolandwa amavidiyo, ama-video asebenza uma ngabe uhlelo luthunyelwa njengobufakazi bezithombe lusebenza kahle yize lungahunyushwa izithombe.
Ihambisa isikhalazo somphakathi jikelele
Ukuba nobufakazi bokuqinisekisa iphoyisa elisolwa ngokungafanele kubaluleke kakhulu, ikhamera efakwe emzimbeni ibifeza leyo ndima kahle impela. Kukwazile ukusula amagama amaningi esikhulu anamacala abekwe wona njengokusebenzisa kabi ulimi nokusetshenziswa kwamandla ngokungadingekile. Kunokwehla okukhulu kwezikhalazo ezifakwa emaphoyiseni selokhu kwaqala amakhamera agqoke umzimba. Lapho nje abantu bekhononda futhi bekhonjiswa imibhalo yangempela, bavele bashelele nje bangabe besabuya, ngoba sebekhululiwe ngobufakazi bevidiyo akusuke kuwubuhlakani ukucindezela ngokuqhubekayo. Sekwenze nokuthi isikhulu sibe ngongcweti ekwenzeni imisebenzi yabo ngoba kuhlale kunokuthi “ngiyabukwa” noma “lobu bufakazi bevidiyo bungabukwa emuva kwesikhathi” ikhamera egqoke umzimba ithengele wonke umuntu isimo sokuwina . Kuvame ukushiwo ukuthi isithombe sibiza amagama ayinkulungwane uma kunjalo ke ividiyo ibiza izigidi.
Izizathu eziyinhloko zokusebenzisa ikhamera egqokwa ngumzimba:
Ukwenza ngcono ukuphepha kwezikhulu
Ukwanda kwekhwalithi yobufakazi
Ukuncishiswa kwezikhalazo zomphakathi
Ukuncishiswa kwesikweletu se-ejensi
Akunzima kakhulu ukubona ukuthi ingakanani ikhamera egqoke umzimba enikeze izinhlaka zomthetho uma ziqhathaniswa nesikhathi amakhamera agqoke umzimba awasetshenziswa, kunamacala amaningi okubekwa wona amacala abhekene nawo. Kwakungekho njalo indlela yokufakazela ukungabi msulwa noma necala labo ekugcineni. Ikhamera egqoke umzimba ingathandeka kaninginingi kusukela sidingida ukuthi uhlobo oluthile lwale makhamera lungafakwa endaweni ehlukile ehlanganisa okhalweni nezibuko.
Kubuye kwaqapheleka ukuthi phakathi kwama-ejensi angayitholanga “ikhamera egqoke umzimba” isizathu esiyinhloko ukuthi anikezwe ukuthi; izindleko zokuthenga, ukulungisa nokugcina izindleko zokugcina zazingenangqondo kakhulu, lokhu akunakufinyeleleka kubo.
Iphuzu lokugcina elizophawulwa maqondana nekhamera egqokwa ngumzimba yindaba yobumfihlo, awukwazi nje ukuhamba nekhamera eqopha konke noma yonke ingxoxo. Kungathathwa njengokwephula ubumfihlo okungaholela ekutheni kudonswe enkantolo. Okubalulekile kwalo kuhamba ngokuqeqeshwa okwanele bese ufunda umthetho wezwe ukuze wazi ukuthi yini okufanele uyenze nokuthi yini ongayenzi. Amanye amacala okwephulwa kobumfihlo alethwa ngisho enkantolo, ubufakazi buvela nakuleya khamera efanayo. Ikhamera egqoke umzimba idinga ukuqeqeshwa ukuze isetshenziswe kahle ngaphandle kokuthola ubunzima. Amaphoyisa ajwayele ukuqhuba izinhlelo zokuqeqeshelwa ukuhlinzeka izikhulu ngolwazi kanye nobuchwepheshe uqobo, ukuqeqeshwa akuyona into nje eyodoti.
Izinzuzo ezingaba khona zeKhamera yeWall Worn for Enforcing igcine ukuguqulwa: Okthoba 10th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3771 Ukubuka kwe-1 Namuhla